Bayern Munich Oo U Soo Bandhigtay Toni Kroos Heshiis Qaali Ah Si Uusan Ugu Biirin Man United.
Kooxda Bayern Munich ayaa isku dayeeysa inay ka ceshato laacib keeda Toni Kroos kooxda Man United oo aad u doonaysa inay la wareegto dhamaadka xili ciyaareed kaan.
Wargayska Bild ee kasoo baxa Germany ayaa shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Bayern Munich ay u soo ban dhigeen laacib kaan heshiis cusub oo uu ku sii joogi doono kooxda Bayern Munich ilaa June 2018 isagoona qaadan doona isbuucii 250 Kun oo Ganni.
Maamulaha qaybta dhaqaalaha u qaabilasn kooxda Bayern Munich Jan-Christian Dreesen ayaa yiri “Waxaan diyaar u nahay inaan siino Kroos lacagaha uu dalbanaayo, waxaan rabnaa inaan sii haysano laacib kaan, dhabtii qadarin wayn ayaan u haynaa qaabciyaareed kiisa wanaagsan ee uu ku suu muujinaayo kooxda”.
David Moyes tabaraha kooxda Man United ayaa horay ugu soo bandhigay laacib kaan mushaar kaan mid la mid ah, Guardiola ayaana u arka in lasiiyo laacib kaan 24 jir ka ah lacagta ay doonayso inay siiso Man United si uusan uga tagin kooxda.
Real Madrid Oo Shardi Adag Ku Xirtay In Alvaro Morata Uu Ku Biiro Arsenal.
Kooxda Real Madrid ayaa ogolaatay in weerayahan kooda da,yarkaa ee Alvaro Morata uu ku biiri karo kooxda Arsenal ee dalka ingiriiska laakiin kooxda Real Madrid ayaa hor dhigtay dhigeeda Arsenal shardi adag.
Shabakada Defence Central oo aad ugu dhaw kooxda Real Madrid ayaa sheegtay in kooxda Real Madrid ay diyaar u tahay inay ka iibiso Alvara Morata kooxda Arsenal kadib markii la sheegay in laacib ka iyo kooxda Arsenal ay si rasmi ah uga wada heshiiyeen shuruudaha gaar ka ah.
Shardiga Real Madrid ay ku xirayso kooxda Arsenal ayaa ah in heshiiska laacib kaan lagu daro inay dib u soo ceshan karaan hadii uu sifiican ula qabasado kooxda ree ingiriis taas oo u muuqata mid bur burin doonta heshiiska labada kooxood ee ku adaan weerar yahan kaan 21 jir ka ah.
Morata ayaa diirada u saaran kooxo ay ka mid yihiin Tottenham, Inter Milan, Juventus oo intuba doonaya inay laso wareegaan xaggaaga soo socda.
Ancelotti: “Waxaa Lagaaray Waqtigii Aan Ku Guulaysan Lahayn Koobab”.
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay in kooxdiisa ay hada diyaar u tahay inay ku guulaysato koobab kadib markii ay sifiican iskula qabsadeen dhamaan ciyaartoyda kooxda.
Ancelotti oo waraysi dheer siiyay TV-ga Real Madrid ayaa ku bilaabay hadal kiisa “Waqtigii la soo dhaafay waxaan dhisaynay koox wanaagsan waxaana saxaynay qaladaad badan oo ka dhex jiray kooxda, waxaan isku dayeeynay inay ciyaartoyda qaar la qabsadaan kooxda, laakiin hada waxaa la joogaa waqtigii aan ku fikiri lahayn inaan ku guulaysano koobab”.
“Waxaan haysanaa ciyaartoy muhiim ah oo sifiican u yaqaana taatikada tababaraha, waxay leeyihiin awood iyo xamaasad ay ku qaadi karaan koobab, waxaan aad ugu baahanahay inaan ku guulaysano koob keenii 10 aad ee Champions League”.
Ancelotti oo wax laga waydiiyay Tata Martino ayaa ku jawaabay “Waa tababare dagan aniga ayuu ii egyahay marka lafiiriyo daganaanta mana jecla inuu sameeyo wax yaalo dood iyo dhibaato dhalin kara, wuxuuna ka shaqaynayaa sidii uu ku hor marin lahaa kooxdiisa”.
Ancelotti oo ka hadlay Casillas iyo Lopez ayaa yiri “Nasiib wanaagayga waxaan haystaan laba gool haye oo cajiib ah sidaas darteed waxaan go,aansaday inaan u qaybiyo kulamada, ma ogi inay labaduba ku faraxsan yihiin xaalada ay ku jiraan hada laakiin waxaan idiin xaqiijin karaa inay sifiican u ciyaarayaan”.
Mario Balotelli Oo Shaki Lagaliyay Inuu Ciyaari Karo Kulanka Juventus.
Waxaa shaki lagaliyay in Mario Balotelli uu ciyaari karo kulanka ay kooxda AC.Milan San Siro ku marti qaadi doonto axada kooxda Juventus oo hogaanka u haysa horyaalka.
Shabakada Sky Sports ayaa sheegtay in uu shaki ku jiro in Mario Balotelli uu ciyaari karo kulanka axada ay kooxda AC.Milan la ciyaari doonto kooxda Juventus, shabakada ayaa intaa ku dartay in laacib kaan uusan ka qaybqaadan tababarkii shalay ee kooxda AC.Milan.
Mario Balotelli ayaa ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa looga adkaaday 0-1 wareega 16 ka ee Champions League isagoona ciyaarta laga saaray kadib dhaawac kasoo gaaray garabka sidoo kale laacib kaan ayaan ka qayb qaadan kulankii ay kooxdiisa 0-2 ugasoo adkaatay axadii kooxda Sampdori.
Mario Balotelli ayaa u dhaliyay kooxdiisa AC.Milan 10 gool horyaalka talyaaniga xili ciyaareedkan.
Wenger Oo Difaacay Kooxaha Ingiriiska: “Aan Ka Warsugno Kulamada Lugta Labaad”.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa difaacay kooxaha horyaalka ingiriiska isagoona sheegay inay tahay xili hore in laga hadlo awooda ay ku dhex leeyihiin Champions League xili ciyaareed kaan.
Arsene Wenger ayaa sheegay in Man City iyo Arsenal ay laciyaareen labada koox ee ugu fiican adduunka iyagoo ku ciyaaray 10 ciyaar yahan, sidoo kale wuxuu sheegay in 4ta koox ee ingiriisku ay kasoo gudbeen wareega Group-yada isagoona sheegay inay haboontahay in lafiiriyo midaas laakiin aan la fiirin hal kulan oo laga adkaaday.
“Waxaan aaminsanahay inay haboontahay marka hore inaad fiiriso in afarta koox ee ingiriisku ay kasoo gudbeen wareega Group-yada, taasna waxaay ku tusinee inay yihiin kuwo tartan ugu jira koobkaan”.
“Tan kale ma ahan in lagu qiyaaso kaliya hal kulan awooda kooxaha ingiriiska, Man City 10 ciyaar yahan ayeey ku ciyaarayeen sidoo kale Arsenal iyagoo lakala ciyaaray Barcelona iyo Bayern Munich oo ah kooxaha ugu fiican adduunka”.
“Aan sugno ilaa aan ka ciyaarayno kulamada lugta labaad markaas aan ka hadalno awooda kooxaha ingiriiska”.
Suarez: “Gerrard Ayaa Igu Qanciyay Inaan Iskasii Joogo Liverpool”.
Luis Suarez ayaa sheegay in saxiib kiis ahna kabtan ka kooxda Liverpool Steven Gerrard uu si wayn ugu lug lahaa inuu iska sii joogo kooxdiisa xili ciyaareed kaan kadib markii uu go,aansaday inuu katago kooxda xaggaagii hore.
Luis Suarez oo waraysi bixiyay ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Gerrard igalama hadlin dhanka saxaafada laakiin wuxuu iila hadlay si shaqsi ahaan ah, waqtigaas uu ila hadlaayay waxaan hilmaamay Gerrard-kii cajiib ka ahaa ee aan ku aqaanay kooxda, laakiin waxaan u arkay inuu yahay qof naxariis badan, wuxuu iiga sheekeeyay wax kasta oo qalbigiisa ku jiro mudo saacado ah”.
“Wuxuu ii sheegay inaan ahay gool dhaliyihii ugu fiicnaa ee uu ka garab ciyaaro noloshiisa, iyadoo ay jiraan weeraryahano aad u fiicnaa oo uu kasoo garab ciyaaray, waxay ii aheed farxad xad dhaaf ah inaan maqlo hadalka nuucaas ah, ma hilmaami doono hadalkaas waligay”.
Suarez ayaa u saxiixay kooxda Liverpool heshiis cusub isagoona aad ugu dhex muuqda kooxdiisa iyo horyaalka ingiriiska intaba wuxuuna midaas uga mahad celinayaa kabtan Gerrard maadaama uu ahaa qofkii kadanbeeyay inuusan ku biirin Arsenal xaggaaggii tagay.
Natiijoyinka Kulamada Europa League: Juventus, Tottenham iyo Fiorentina Oo Wareega 16-ka U Soo Gudbay.
Waxaa xalay la ciyaaray kulamada lugta labaad Ee wareega 32 Ee koobka Europa League waxana kooxo badan ay si lama filaan ah ugu soo gudbeen wareega 16-ka halka kooxo kale ay cawada macsalameeyn Europa League.
Tottenham oo lugtii hore 1 gool looga soo adkaaday ayaa cawada wax xooga dhiig is soo galisay iyadoo 3-1 ugu awood sheegaty FC Dnipro oo 10 ciyaaryahan ku ciyaareysay, qeybtii hore Ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah balse marki leysku soo noqday Roman Zozulya ayaa gool kaga naxsaday Tottenham daqiiqadii 47-aad lakiin Eriksen ayaa daqiiqadii 56-aad goolka barbaraha u saxiixay Spurs waxana daqiiqadii 63-aad kaar casaan ah loo taagay Roman Zozulya halka Adebayor uu daqiiqadihii 65-aad iyo 69-aad uu labba gool dag dag ah dhaliyay ay Tottenham u shashay inay ka talaabsato Dnipro, waxeyna labadda lug isku cel celis ahan ku soo baxdeen 3-2.
Dhanka kale Juventus ayaa Trabzonspor ku dubatay 0-2 kadib goolal ay kala dhaliyeen Arturo Vidal daqiiqadi 18-aad iyo Paplo Osvaldo daqiiqadii 33-aad, waxeyna kooxda marwada duqada isku cel celis ahaan ku soo baxday 4-0, halka Valencia ay barbaro goolal la’aan ah la dhaafi weysay Dynamo Keiv ciyaar ka dhacday Mestalla Stadium, waxeyna goolal tirsi ahaan ku soo baxdy 2-0 oo ay kulankii hore ku soo adkaatay.
Natiijoyinka kulamadi kale Ee cawada la ciyaaray, AS Alkamar ayaa barbaro 1-1 la dhaafi weysay Liberec balse u soo gudubtay wareega 16-ka iyadoo isku cel celis ahaan labadda kulan ku soo adkaatay 2-1 halka Benfica ay xasuuq ba’an u geysatay PAOK Thessaloniki FC kadob ciyaar ku soo dhamatay 3-0, waxeyna Benfica ku soo baxday 4-0, halka Fiorentina ay bar baro 1-1 la dhaafi weysay balse goolal tirsiga labadda kulan ay ku soo baxday 4-2.
Lyon ayaa gool qura ugu soo gudubtay wareega 16-ka kadib markii lugti hore ay ku soo dhamatay bar baro goolal la’aan ah, waxana goolka qura u saxiixay Alexandare Lacazette, halka Anzhi Makhachkala ay Genk ku dubatay 0-2 sidaana ay ugu soo gudubtay wareega 16-ka.
Kooxaha soo baxay Ee u gudbay wareega 16-ka Europa League ayaa kala ah Juventus, Tottenham, Valencia, Fiorentina, Benfica, Lyon, Anzhi Makhachkala AS Alkamar, waxana goor sii horeysay cawada soo baxay sideed koox kale.
Van Persie Oo Ku Tilmaamay Xili Ciyaareed ka Man United Mid “Xun”.
Weeraryahanka kooxda Man United Robin Van Persie ayaa ku tilmaamay xili ciyaareed kan mid xun oo liita marka loo firiyo dhibaatada haysata kooxdiisa.
Van Persie ayaa sheegay in xili ciyaareed kan ay yihiin kuwo liita sidoo kale wuxuu sheegay inay horyaalka uga jiraan boos xun wuxuuna intaa ku daray inay ka hareen Capital One Cup iyo FA Cup, isagoo aan rajo badan ka muujin Champions League.
Van Persie oo waraysi gaara siiyay wargayska The Sun ayaa yiri “Waa xili ciyaareed xun, waxaan uga jirnaa horyaalka meel xun, waxaan ka harnay Capital One Cup iyo FA Cup, Champions League isna wuxuu u muuqdaa mid adag”.
Van Persie oo wax laga waydiiyay David Moyes ayaa ku jawaabay “Waa xili ciyaareed kiisii ugu horeeyay, wuxuu u shaqaynayaa si wanaagsan wuxuuna u baahanyahay waqti in lasiiyo, waa wax fudud in tababaraha loo saariyo guul darada kooxda laakiin arinku sidaas ma ahan, anaga ayaa nalaka rabaa inaan dadaal badan samayno marka aan ku jirno garoonka”.
Tababaraha Barcelona Oo La Ganaaxay Xilli Barcelona Ay Diiday Inay Racfaan Ka Qaatan.
Tababaraha kooxda Barcelona Gerrardo Tata Martino ayaa la ganaaxay hal kulan isagoo seegi doona kulanka ay Barca Camp Nou kula ciyaari doonto kooxda Almerisa kadib qalad uu galay kulankii kooxdisa looga awood roonaday 3-1 Ee ka dhacay Aneota Stadium.
Gerardo Martino ayaa garoonka laga saaray qebtii hore Ee kulankii ay Real Sociedad la ciyaarayeen loomana ogolaan doono inuu soo xaadiro kulanka Almeria, iyadoo kooxda Barcelona ay si rasmi ah u shaacisay inaysan racfaan ka qaadn doonin ganaaxa Martino.
Kulanka sabtida Ee kooxdisa Barca soo dhaweyn doonta ayaa wax ka maqna doono wajiyo dhowr ah oo uu hor kacayo tababare Tata Martino, iyo Gerrard Pigue oo dhawac qab halka sido kale Jordi Alba, Jose Pinto, iyo Issac Cuenca oo tababar gooni ah qaatay Maanta.
Dhanka kale Tababare Gerrado Martino ayaa tababarki Maanta ugu yeeray seddex ka mid aha kooxda Barca B iyo sideed ka mid Junior A Ee kooxda Barca iyagoo tababar la qaatay kooxda kowaad Ee Barcelona.
Ronaldo: BBC (Bale, Benzema, Cristiano) Shaqo Weyn Ayay Qabteen.
Cristiano Ronaldo ayaa amaanay ciyaartoyda kooxda Real Madrid ka dib markii ay guul weyn oo 6-1 ka gaareen Schalke xalayto, laakiin waxa uu qirtay in seddexda weerar ee isaga, Benzema iyo Bale inay gaar ahaan shaqo fiican qabteen.
Min labo gool oo ay dhaliyeen BBC (Bale, Benzema, Cristiano) ayaa Los Blancos u xaqiijisay inay hal lug la sii galaan wareega 8da, iyadoo Klaas-Jan Huntelaar uu hal gool oo sabarsiin ah u soo celiyay kooxda martida loo ahaa waqtigii dhimashada ciyaarta.
Weerarka Madrid ayaana xaday cinwaan weynaha wargeysyada ka dib qaab ciyaareed aan naxariis laheyn oo ay ku soo bandhigeen Gelsenkirchen, laakiin Ronaldo ayaa sheegay in kooxda oo dhan ay u qalanto in lagu amaano dadaalkooda.
“Dhamaan seddexdeena [Ronaldo, Benzema and Bale] shaqo fiican ayaan qabanay, kaliyana ma ahan goolashii aan dhalinay” ayuu CR7 u sheegay Canal Plus. “Guud ahaan kooxda oo dhan laga soo bilaabo Casillas, daafacyada ilaa khadka dhexe, qof walba shaqo weyn ayuu qabtay.
“Waxaan ciyaarnay kulamo qaar oo aad u fiican xilli ciyaareedkan, tanina mid kale ayay aheyd. Schalke kuma aysan jirin heerkoodii ugu fiicnaa. Waan faraxsanahay madaama aan haatan aad ugu dhow nahay inaan gaarno wareega xiga.”